QUNHAN PLASTIC COMPANY, LTD. ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ သောအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကုန်ကြမ်းမှအင်ဂျင်နီယာနှင့်၎င်းတို့၏ကြံ့ခိုင်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်တာရှည်ခံဝန်ဆောင်မှုအသက်အဘို့အအသိအမှတ်ပြုသည်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေး၏အရည်အသွေးအာမခံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းရောင်းချသူထံမှရယူဖို့သောဤအသုံးချဖို့တန်းမြင့်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေး၎င်း၏ finish ကိုမြင့်မားပြီးအကြမ်းခံနှင့်အံ့မခန်းဖြစ်ပြီးထိုကြောင့်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့မြင့်မားဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးမျိုးသောအရောင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Poly(methyl methacrylate) (PMMA)မကြာခဏစာရွက်ပုံစံအတွက်ပေါ့ပါးသို့မဟုတ်ချိုးအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ပွင့်လင်း thermoplastic ဖြစ်ပါတယ်-ဖန်မှခံနိုင်ရည်ရှိသောရွေးချယ်စရာ.တူညီသောပစ္စည်း Casting ဗဓေလသစ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်,မှင်နှင့်အင်္ကျီ၌တည်၏,နှင့်များစွာသောအခြားအသုံးပြုမှုရှိပါတယ်.
မဟုတ်အကျွမ်းတဝင် silica အမျိုးအစားမဟုတ်ပေမယ့်-အခြေခံဖန်ခွက်,ပစ္စည်းဥစ္စာ,များစွာသော thermoplastics လိုပဲ,မကြာခဏနည်းပညာကိုဖန်အမျိုးအစားအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်(သောကြောင့်မဟုတ်သောဖြစ်ပါတယ်-ကြည်လင်ဖန်ထည်ပစ္စည်းဥစ္စာ)acrylic ဖန်အဖြစ်ဤအရပ်မှ၎င်း၏ရံဖန်ရံခါသမိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ရေး.ဓာတုဗေဒ,က methyl methacrylate ၏ဒြပ်ပေါ်လီမာဖြစ်ပါတယ်.
Acrylic(PMMA)ပလပ်စတစ်ဗဓေလသစ် applications များ:
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.recycledplasticresin.com/my/pmma-pellets.html